Ihe Oriri | October 2021
Isi > Ihe Oriri
kalori na bourbon
Calories na bourbon - azịza ohuru
Kedu kalori dị na 2 gbaa nke bourbon? Mkpụrụ obi ọ bụla na-anụkarị ụtọ ma ọ bụ sie. Bourbon bụ ụdị wiski, n'ihi ya, ihe ọ alcoụ threeụ atọ ndị a nwere ihe dị ka otu kalori n'otu ihe ọ drinkụ standardụ ọ standardụ .ụ. Enwere ihe dị ka calorie 97 kwa mmanya ọ standardụ ofụ nke rum, whiskey na bourbon.
Protein ke nsen ọcha ma ọ bụ yolks - azịza dị mfe nye ajụjụ
Kedu ihe nwere nkochi ime akwa karịa nke ọcha? Yolk vs. Tụnyere ihe 2,7 g nke protein na nkochi ime akwa nke otu, nnukwu akwa, ọcha na-enye 3,6 g. Ọ bụ ezie na ọcha na-enye protein ndị ọzọ, nkochi ime akwa nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vitamin na mmiri nwere ike ịmịkọrọ mmiri na àkwá.
ahụekere bọta butter
Ahụekere bọta butter - ịchọta ihe ngwọta
Ahụekere butter bụ ezigbo ihe na-enye protein? Ahụekere ahụekere bara ọgaranya na abụba na-edozi ahụ ma bụrụ ezigbo protein, nke nwere ike inye aka maka ndị anaghị eri anụ na-achọ itinyekwu protein na nri ha. Otu ngaji butter butter na-enye ihe ruru gram asatọ nke protein na ụyọkọ nke gram 2 ruo 3. 1, 2017
vitamin d na-agbakwunye nri niile
Vitamin d na-agbakwunye nri niile - otu esi edozi ya
Gịnị bụ vitamin D kacha mma ị ga-eri? Kedu ụdị vitamin D kachasị mma? Vitamindị vitamin D a tụrụ aro bụ vitamin D3 ma ọ bụ cholecalciferol. Nke a bu ụdị vitamin D nke ahụ gị na - enweta site n’anwu anwụ. 17.12.2009
obere nri carb na afib
Nri ala obere carb nwere ike ibute AFib? A na-ejikọta nri ndị na-eme ka carbohydrate dị obere na ihe egwu dị egwu nke atr fibrillation, na-egosi na usoro njikwa njikwa a na-ewu ewu, site na igbochi nri carbohydrate, kwesịrị iji nlezianya na-atụ aro ya ma a ga-eduzi ọmụmụ ihe ndị ọzọ iji nyochaa mmetụta ahụ. 25.04.2019
nri ndị na-egbochi ọrịa cancer akpa ume
Nri na-egbochi kansa cancer - otu esi emeso
Kedu nri ndị kachasị mma iji lụso ọrịa cancer akpa ume ọgụ? Họrọ nri nwere protein, sie anụ dị ka ọkụkọ, azụ, ma ọ bụ toki.Eggs.Ebelata mmiri ara ehi nwere mmiri ara ehi dị ka mmiri ara ehi, yogọt, na chiiz ma ọ bụ mmiri ara ehi dochie ya.
nri ndị na-egbu oge gị
Ndi akwa o belata? Akwa. Àkwá bụ ezigbo ihe na-enye protein na-enweghị ahụ ike mana ha enweghị carbs achọrọ iji mee ka ọsụsọ na-agwụ ike. Ebe ọ bụ na protein na - ewe ogologo oge ka ahụ gbarie, omelet nwere ike ibute gị ma ọ bụrụ na ị richaa nso mgbatị gị. 16.06.2015
mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kasị ala
Kedu mkpụrụ osisi nwere ntakịrị shuga? Mkpụrụ osisi shuga dị ala gụnyere: Strawberries. Strawberries, dị ka ọtụtụ mkpụrụ osisi ndị ọzọ, na-enwekarị eriri ma nwee obere suga. Piich. Ọ bụ ezie na ha na-atọ ụtọ, obere bekee piich nwere naanị ihe dịka 13 g shuga. Lemọn na wayo. Mmanụ a Honụ Honeydew. Oroma. Mkpụrụ osisi grepu. Avocados.
atkins nri na nke anyị
Atkins diet vs keto - esi edozi
Kedu nke ka mma Atkins ma ọ bụ keto? Atkins na keto bụ nri ndị nwere obere obere carb nke nwere ike ịbara uru ọnwụ, njikwa shuga, na ahụike obi. Ihe dị iche ha bụ na ị na-eji nwayọọ nwayọọ mụbaa nri carb gị na Atkins, ebe ọ na-adịkarị obere na nri keto, na-eme ka ahụ gị nọrọ na ketosis ma gbaa ketones ume.
top 5 elu protein oriri
Top 5 ihe oriri protein dị elu - otu esi edozi
Kedu ihe kachasị elu na protein? Nnukwu nri protein site na njupụta na-edozi ahụ (Ọtụtụ protein na 100 grams) Parmesan Chiiz View (Isi Iyi) 100 gram83% DV (41.6g) # 4 Lean Veal Top Round View (Isi Iyi) 100 gram 73% DV (36.7g)
otu esi amalite ịgụ calorie
Otu esi amalite ịgụ calorie - ịchọta ihe ngwọta
Kedu otu ị ga-esi gụọ calorie maka ndị mbido? Otu esi agụta calorie na usoro 3 dị mfe Họrọ ma ịchọrọ ị nweta, tufuo ma ọ bụ jigide ibu ga-enye gị kalori ihe mgbaru ọsọ kwa ụbọchị iji chọọ maka nke a bụ nzọụkwụ mbụ iji gụọ calorie. Kwadebe nri gị ma debe akwụkwọ edetu (jiri ngwa) Tụlee nri gị & soro na-enwe ọganihu gị.8 A. Chukwuemeka odumegwu ojukwu 2018
Nri ndị dị a haveaa kachasị arụ ọrụ ọkụ? Onye na-eri nri na-eri nri bụ Trudy Stone kwenyere, 'akwa bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma protein na-ere abụba nke ga-eme ka ị gbasie ike. Egosiputa nri di elu na protein iji bulie metabolism gi, n'ihi ihe onodu ike nke nri-kalori nke aru gi na-agbari iji mejuputa ihe oriri. ”27 percent. Chukwuemeka odumegwu ojukwu
obi ezi anụ
Anụ ahụ siri ike - ajụjụ nkịtị
Kedu anụ dị mma maka obi? Debe anụ ndị nwere oke abụba.Beef, anụ ahụ na-adaghị adụ ma na-agbanye ala ma ọ bụ sirloin. Ọkụkọ ma ọ bụ toki na akwara, enweghị akpụkpọ anụ, ọkpụkpụ na anụ ọkụkọ ma ọ bụ toki, ala. Mkpụrụ obi anụ ezi, nke abụba mara abụba.Seitan.Tempeh.Tofu.16 июл. Afrịka 2020
phosphates na nri
Phosphates na nri - esi edozi
Kedu nri ndị dị na phosphates?
bụ ọnụ ọnụ ugwu dị mma
Bụ ọnụ ọnụ ụlọ Ogwe ike - esi ekpebi
Nwere Clif Bars dị mma maka gị n'ezie? Ha nwere calorie dị ukwuu, ha nwekwara gram 44 nke carbohydrate iji nyere aka mee ka uru ahụ gị dị ma ọ bụ mejupụta ụlọ ahịa glycogen gị. Rab jidere Clif Bar maka ogologo njem bụ nnukwu echiche, mana ọ bụrụ na ị na-eri nke a ka ị na-anọdụ n'ihe ndina ya, ị ga-enwe nri dị mma karịa. Oct 18, 2019
a na-agbanye ikuku dị mma
Ndi ikuku frying di nma - ihe edozi nye nsogbu
Gini mere ikuku fr ji adighi gi nma? Ọ bụ ezie na ikuku fryers na-ebelata ohere nke imepụta acrylamide, ogige ndị ọzọ nwere ike imerụ ahụ ka nwere ike ịmalite. Ọbụghị naanị na eghe ikuku ka na-ebute ihe egwu nke imepụta acrylamides, mana polycyclic aromatic hydrocarbons na amines heterocyclic nwere ike ịpụta site na ọkụ niile dị ọkụ na anụ.
Protein shake tupu ị lakpuo ụra - otu esi enweta ya
Ọ dị mma ịmị protein tupu ị lakpuo ụra? Protein nwere ọtụtụ elele ma nwee oke ego tupu ụra eburu uru ya. Ime ka protein na-eji nke nta nke nta na-ehi ụra mgbe ị na-alakpu ụra na-eme ka ogologo njikọ njikọ akwara na-arụ ọrụ, na-eme uru ahụ ka ị na-ehi ụra. Ngwunye protein na ụra na-eme ka izu ike gị dịkwuo mma ma na-eme gị ume maka ụbọchị na-abịanụ.Feb 12, 2021
osikapa aja aja pasta ike
Ọ aja aja osikapa pasta ike - a ngwọta
Pasta osikapa aja aja bụ onyinye dị mma maka ụkọ ọnwụ?
bụ beef jerky ike
Beef jerky dị mma - esi ekpebi
Anụ anụ ụlọ amị dị mma maka ịlalata? Anụ anụ ezi nwere nnukwu protein. Iri protein dị mkpa maka ụfụ dị arọ n’ihi na ọ na-agbari nwayọ nwayọ karịa carbohydrates, yabụ ị ga-enwe afọ ojuju ogologo oge. Ego ọzọ maka beef jerky bụ na ọ naghị emepụta insulin, nke bụ homonụ nke na-egosi ahụ na-echekwa abụba. 13 мая 2021 г.
bụ oyi kpọnwụrụ inine ike
Ndi oyi kpọnwụrụ Inine ike - kwere omume ngwọta
Akwụkwọ nri ndị oyi kpọnwụrụ nwere ahụ ike dịka akwụkwọ nri ọhụrụ? 'Ikpokọta na' nri A na-ejikarị mkpụrụ akwụkwọ nri akpọnwụ kpọnwụrụ ngwa ngwa ewechara ha. Ihe oriri na-edozi ahụ 'oyi' n'ime oge a, nke pụtara na ị nwere ike ịnwe ọtụtụ vitamin na akwụkwọ nri 'oyi' karịa ibe ya 'ọhụrụ'. Mana enwere ihe karịrị mkpụrụ osisi na osisi karịa naanị vitamin. 13 мая 2017 г.